I-118 I-Channel Ebucayi i-Istanbul Umbuzo ovela kwi-CHPli Tanrıkulu | RayHaber | raillynews
[08 / 02 / 2020] I-50 yezigidi ze-Euro iTyala leFahrettin Altay Narlidere Metro	35 Izmir
[08 / 02 / 2020] Ukuhamba Hike kuchazwe nguImamoglu	34 Istanbul
[08 / 02 / 2020] Abakhenkethi kwi-Eastern Express yokwamkela iiNxusa zase-EU	06 Ankara
[08 / 02 / 2020] Icandelo loMphathiswa Wezothutho: '2002 Abantu bafa kwiingozi zeLoliwe ngo-2019 ukuya ku -1678'	06 Ankara
[08 / 02 / 2020] Isikhululo sebhasi i-Istanbul enkulu siphumelele iiNkxaso zoBabini abaTradi bakaBemi	34 Istanbul
ikhayaETURKEYSithili saseMarmara34 IstanbulI-118 I-Channel ye-Crazy Istanbul Imibuzo evela kwi-CHPli Tanrıkulu
24 / 01 / 2020 34 Istanbul, JIKELELE, Isiteshi saseIstanbul, Highway, ZOMHLATHI, Sithili saseMarmara, ETURKEY
Ukuchazwa kwe-IMM kwi-Kanal Istanbul Cooperation Protocol
I-Republican People's Party Istanbul uSekela-Atty. Sezgin Tanrikulu, Channel Istanbul thaca isindululo equlathe 118 Pojesi imibuzo ebalulekileyo malunga Grand National Assembly of Turkey.
Amawakawaka abemi kwiprojekthi yaseKhanal Istanbul benze inkcaso zabo ngaphakathi komgaqo-nkqubo wokuba baya kubangela umonakalo ongalunganga kwindalo.
Inkqubo yokuchaswa kwengxelo ye-EIA ngeKanal Istanbul, eqale nge-25 kaDisemba, igqityiwe, kwaye ngaphandle kwemozulu ebandayo, abahlali base-Istanbul bathontelana ukuya kwi-Istanbul Directorate yeNdawo yokusiNgqongileyo kunye neDolophu eBalmumcu kangangeentsuku ezili-10 bahambisa izicelo eziliwaka ezili-100 kwicandelo.
I-Sezgin Tanrıkulu ye-CHP ikwatsho kwisicelo sakhe sokuba uhlahlo-lwabiwo mali olubekelwe bucala luhambelana nee- $ 12 zezigidi ezingama-626 ezigidi xa kubalwa izinga lwanamhlanje lotshintshiselwano. Kwinkcazo esemthethweni yoMphathiswa Wezothutho kunye nezibonelelo ezilungiswe ngo-2018, kuchazwe ukuba iindleko zizonke zeKanal Istanbul ziya kuxabisa iibhiliyoni ezingama-20, kwiphepha lama-40 kwiphepha lama-37, "ukumbiwa ngokupheleleyo, iindleko zokuhambisa kunye nokugcina: iibhiliyoni ezili-10 zeedola, ukugquma, ukutywina, umhlaba Okubandakanywe kwisicelo sedatha yokuhlaziya, iibhuleki, i-bromst engxamisekileyo, indawo yokusebenza njl.
Imibuzo ye-CHP Istanbul Isekela le-Sezgin Tanrıkulu yile ilandelayo:
1. Bangaphi babemi bethu abanokuhlala kunye nexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
2. Zingaphi iiProjekthi zeKOSGEB ezinokuxhaswa ngeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
3. Bangaphi abafundi abanokufumana ityala labo lemali mboleko yemali ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
4. Bangaphi abafundi abanokunikwa isifundiswa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
5. Ngokujonga ukuba iqondo lentswela-ngqesho kubantu abancinci laliipesenti ezingama-4,5 ngokukonyuka kwamanqaku ayi-26,1, kwiqela labudala beminyaka eli-15-64, eli zinga lafezekiswa njengepesenti ezili-2,4 ngokunyuka kwamanqaku ayi-14,1, bangaphi abahlali abanokwenza utyalomali olunokuphelisa ingxaki yokungaphangeli?
6. Zingaphi iilali ezinokuthi zakhiwe nenethiwekhi yamanzi okusela ngeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
7. Zingaphi iilali ekunokufikelelwa kuzo kwindlela emdaka ngexabiso lokutyala kweProjekthi yeCanal Istanbul ingaba yindlela ye-asphalt?
8. Zingaphi izithambisi zeqhwa kunye neziqhushululu zendlela ezinokuthengwa ukuze zisetyenziswe kumakhaya ethu, iilali, izithili kunye namaphondo aneendlela ezivaliweyo ngenxa yeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project nekhephu elinzima?
9. Zingaphi ii-ambulensi ezi-4 × 4 zepallet ezinokuhanjiswa kwizithuthi zoncedo olungxamisekileyo kwizigulana ezindleleni ezigqunywe likhephu ngeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
10. Zingaphi izikolo ezinokwakhiwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
11. Bangaphi ootitshala abalinde ukuqeshwa ngeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project abanokuqalisa ukusebenza?
12. Bangaphi ootitshala abakhubazekileyo abalinde ukuqeshwa ngeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project abanokuqalisa ukusebenza?
13. Bangaphi abantu abaza kutshata ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project abanokulufumana uncedo lomtshato?
14. Bangaphi babemi bethu 'be-GSS engahlawulelwa ngexabiso lokutyala leKanal Istanbul Project?
15. Bangaphi abahlali abanokufumana i-SMA simahla ngentengo yotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
16. Mangaphi amadama anokwakhiwa ngeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
17. Zingaphi izibhedlele zikarhulumente ezinokwakhiwa, kubandakanya amaxabiso otyalo-mali lweKanal Istanbul Project kunye nezixhobo zangaphakathi?
18. Bangaphi abahlali, abalinde ixesha lokudibana kwicandelo lezempilo, kunye nexabiso lotyalo-mali lweProjekthi yeIanbul yaseCanada bangaqinisekiswa ukuba baqala?
19. Bangaphi abalimi abanokunikwa inkxaso yetrektara ngesibonelelo seepesenti ezingama-50 ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
20. Bangaphi abalimi (bali-10 ngalinye) abanokunikwa iinkomo zobisi ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
21. Ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project, mangaphi amafama (ali-10) anokunikwa i-veal yokuzala?
22. Bangaphi abantu abancinci abanokuthi bafumane iinyanga ezi-6 zokufunda ulwimi lwangaphandle kwimfundo yolwimi lwangaphandle ngexabiso lotyalo-mali lwePanal Istanbul Project?
23. Mangaphi amaziko e-R & D kunye nophuhliso lwetekhnoloji anokusekwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
24. Zingaphi izibuko ze-yacht ezinokwakhiwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
25. Bangaphi abantu basetyhini abanokuqeshwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
26. Zingaphi izixhobo zokucima umlilo ezinokuthengwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
27. Bangaphi abahlali abakhubazekileyo abanokuqeshwa eluntwini ngeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
28. Bangaphi abafundi abanokufumana izibonelelo zokuhlolwa kweyunivesithi mahala simahla ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
29. Ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project, bangaphi abafundi baseyunivesithi abanokuhambisa ikhadi elinomgangatho oyi-1000 TL ngonyaka oza kusetyenziswa kwiinkcubeko nakwizinto zobugcisa?
30. Zingaphi izityalo ezisebenzisa amandla elanga ezinokwakhiwa ngeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
31. Zingaphi iiturbines zomoya ezinokufakwa kwiindleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
32. Bangaphi abantu abanokuthi baxhamle kumalungiselelo ongezelelekileyo angama-3600 kunye neendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
33. Zingaphi iimoto zasekhaya ezinokwenziwa ngexabiso lotyalo mali lweProjekthi yeIanbul yeCan?
34. Zingaphi iiplani ezindlwini ezinokwenziwa kunye neendleko zotyalo-mali kwiPaneli ye-Istanbul yeProjekthi?
35. Ngeendleko zotyalo-mali zeKanal Istanbul Project, bangaphi abafundi baseyunivesithi abanokunikwa isibonelelo sokuthatha inxaxheba kukhenketho lwasekhaya (kube kanye ngonyaka) ukuze baziphucule ngokwasekuhlaleni nangokwenkcubeko?
36. Ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project, bangaphi abafundi baseyunivesithi abanokunikwa isibonelelo sokuthatha inxaxheba kuhambo lwamanye amazwe (kube kanye ngonyaka) ukuze bakwazi ukuziphucula ngokwasentlalweni nangokwenkcubeko?
37. Isiqingatha serenti, ikhaya, indawo yokuhlala kunye nokuhlala ngaphandle kwabafundi beyunivesithi ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project, banokuhlawulwa ngurhulumente?
38. Isiqingatha somthetho wombane wokuba bangaphi abafundi baseyunivesithi kunye nendleko zotyalo-mali zeKanal Istanbul Project banokuhlawulwa ngurhulumente?
39. Bangaphi oomama abasebenzayo abanokufumana uncedo lweenkulisa ngendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
40. Bangaphi abantu abanokuqeshwa ngokunika urhulumente otyalo-mali kunye nomvuzo weminyaka emihlanu weprojekthi yeKanal Istanbul ngurhulumente?
41. Bangaphi oomama abasebenzayo abanokufumana uncedo lweenkulisa ngendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
42. Mangaphi amaziko emfundo eyodwa anokusekwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
43. Mangaphi amaziko emfundo oluntu anokuvulwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
44. Zingaphi izityalo ezingcolileyo zamanzi ezinokusekwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
45. Zingaphi iindawo zokuhlala izilwanyana ezinokwakhelwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
46. ​​Zingaphi iindawo zokuhlala izilwanyana ezinokwakhiwa ngeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
Zingaphi iindawo zokuhlala ezakhiwe ezinokubakho ngexabiso lotyalo-mali lweProjekthi ye-Kanal Istanbul ye-47 enomthamo wabantu abangama-200?
48. Zingaphi iindawo zokujonga ezinokwakhiwa ngeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
49. Zingaphi imigodi ezinokwakhelwa amaxabiso otyalo-mali lwePanal Istanbul Project?
Zingaphi iikhilomitha ezinokwenziwa ngexabiso lotyalo-mali lama-50. Iprojekthi yeKanal Istanbul?
51. Zingaphi iikhilomitha zeendlela eziphindwe kabini ekufuneka zigcinwe zaze zahlaziywa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project enokugcinwa kwaye ilungiswe?
52. Zingaphi iindawo ezinendawo yokuhlangana ezinokwakhiwa ngeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
53. Mangaphi amashishini amachiza anokuxhaswa ngeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project, kwaye ubuzwe kunye nobuzwe bezitshabalalisi zokubulala izitshabalalisi zinokufezekiswa?
54. Zingaphi iiprojekthi zeTUBITAK ezinokunikwa ngexabiso lotyalo-mali lwePanal Istanbul Project?
55. Mangaphi amaziko ezempilo abalekayo anokuvulwa ngendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
56. Zingaphi iilali ezinokuqeqeshwa kuqeqesho lomsebenzi weKhanal Istanbul?
57. Zingaphi izikolo eziphakamileyo zomsebenzi ezinokuvuselelwa ngokweemfuno zobudala ngeendleko zobudala beprojekthi yeKhanal Istanbul Project?
58. Zingaphi izifundo ezenziwayo kwinkalo yolwimi kunye nembali ezinokuthi zixhaswe ngokubonelela ngezixhobo kumaziko anjengeZiko loLwimi lwaseTurkey kunye noMbutho waseTurkey Wezembali ngeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
59. Ixabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project kunye cinema, documentary njl. Ngaba ungaphakanyiswa ngoncedo lwezinto zosasazo ezinjenge?
Ngexabiso lotyalo-mali lweProjekthi yeIranbul ye-60, bangaphi abahlali abakhubazekileyo abanokubonelelwa ngemoto eneebhetri kunye nerempu ekungeneni kwendlu?
61. Bangaphi abahlali abakhubazekileyo abanokubonelelwa ngoncedo lokuva ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
62. Indawo yokupaka izithintelo ngaphandle kwesithintelo inokwakhiwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project, enezixhobo ezininzi abantwana abanokuzikhulisa imfundo, amava kunye nezakhono zabo.
63. Indleko zotyalo-mali kwiPaneli yeIanbul yeProjekthi kunye neenkonzo zokuhlengahlengisa, izinto ezisetyenziswa kwezonyango njl njl. ingagutyungelwa ngurhulumente?
64. Zingaphi iindlela zonyango kunye nezibhedlele ezivuswayo ezinokuvulwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
65. Mangaphi amaZiko eMpilo yeNtloko aseNtluntlwini anokuvulwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
66. Bangaphi abasebenzi abasebenza esidlangalaleni abanokuthi banikwe uqeqesho lwentetho yezandla kunye nexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
67. Bangaphi abaguli, ababaluleke kakhulu, kunye neendleko zotyalo mali kwiprojekthi yeCan I-Istanbul inokugqunywe ngamayeza, utyando kunye nonyango?
68. Bangaphi abantwana ekufuneka basebenze nangona bengaphantsi kweminyaka eli-18 ngendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul banokuthi baqhubeke nobomi babo bemfundo ngokuxhaswa ngezimali?
69. Ngeendleko zotyalo-mali kwiprojekthi yaseKhanal Istanbul, zingaphi iintsapho (abantu aba-2500 abanengeniso yenyanga ngaphantsi kwe-4 lira) ezinokurentwa, igesi yendalo, umbane kunye noncedo lwamanzi?
70. Bangaphi abantu basetyhini abanokuhlala kwindawo yokuhlala yabasetyhini kunye neendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul yeprojekthi?
71. Zingaphi iinkqubo zolawulo lokusingqongileyo ezinokumiselwa ukuthintela iingxaki zokusingqongileyo ngendleko yotyalo mali lweProjekthi yeCanal Istanbul?
72. Zingaphi izixeko ezinokuthi ziqinisekiswe ukuba iprojekthi "yokwahlula inkunkuma kumthombo" kunye neendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project ziyafezekiseka?
73. Zingaphi iindlela zotyalo-mali ezinokuthi zixhaswe kwindalo esingqongileyo ngendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
74. Zingaphi iindlela ezizinzileyo zolimo ezinokusetyenziswa ngeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
75. Zingaphi iimeko zesikolo zokusebenzisa itekhnoloji ezinokuphuculwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project kunye nokusetyenziswa komgaqo-nkqubo wamathuba alinganayo emfundweni (ngakumbi kwiilali nakwiindawo ezisemaphandleni)?
76. Ngexabiso lotyalo-mali lwePanal Istanbul yeProjekthi, bangaphi abahlali abangenakhaya abanokuhlala ngokuhlala?
77. Mingaphi imibutho engekho phantsi korhulumente esebenzela abantu abangenamakhaya enokuxhaswa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
78. Zingaphi izifundo ezinokuxhaswa ekubuyeni kwabemi bethu abangenakhaya ekuhlaleni ngendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
79. Zingaphi izakhiwo zembali ezinokubuyiselwa ngendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
80. Zingaphi izakhiwo zengozi ezinokuthi zivuselelwe ngendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
81. Zingaphi iiprojekthi ze-AFAD ezinokuthi zixhaswe ngendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
82. Inkonzo yezilwanyana yasimahla inokubonelelwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project malunga nezilwanyana ezininzi ezilahlekileyo.
83. Bangaphi abafundi abadinga uncedo lwasentlalweni (yi-YSYM) kunye nentlawulo yeemviwo zeKanal Istanbul Project enokuhlawulwa ngurhulumente?
84. Zingaphi izindlu zokuhlala ezakhiwayo kunye neendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project (ikhulu lamawaka e-TL nganye)?
85. Zingaphi iisathelayithi ezinokuthunyelwa emkhathini kunye nendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
86. Bangaphi oosomashishini abafuna ukuqala ishishini labo ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project banokufumana amawaka angama-50 e-TL kwinkxaso?
87. Zingaphi ii-mosque, cemevis, izindlu zesikhungu kunye neendleko zombane zeenkonzo ezinokuhlawulelwa ngeendleko zotyalo-mali lweProjekthi yeIanbul yeCan?
88. Zingakanani iindleko zokuhlawulwa kwe-mosque, cemevi, indlu yesikhungu kunye neyecawa?
89. Mingaphi imigca yesantya esiphezulu enokwakhiwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
90. Zingaphi izibonelelo ezomeleleyo zokulahla inkunkuma ezinokusekwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
91. Mangaphi amakhaya abantu abakhulileyo abanomgangatho wekhulu anokusekwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
92. Zingaphi izinto ezenziweyo kunye nezinto zophando ezinokuthi zikhawuleziswe ngokwenyuka kwexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project kunye nohlahlo-lwabiwo mali olubekelwe ukhukuliswa kwezinto zakudala?
93. Zingaphi iimyuziyam ezinokusekwa ngexabiso lotyalo-mali lwePanal Istanbul Project?
94. Zingaphi iithiyetha zikarhulumente ezinokusekwa ngeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
95. Bangaphi abacimi-mlilo abanokwabiwa ngendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
96. Zingaphi iiprojekthi ezinokuthi zixhaswe ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project kunye nokukhuselwa kwabasetyhini kubundlobongela, ukusombulula ingxaki yomakoti wabantwana kunye nokwandisa ingqesho yabasetyhini?
97. Zingaphi izibini (ezinemeko yokudibana nomhlaba ngokwazo) ezinokufakwa kwihektare nganye kunye nendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
98. Zingaphi ii-kindergartens ezinokuvulwa ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
99. Mangaphi amacandelo emfundo anokuthi axhase iphulo lotyalo-mali ngendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
100. Mangaphi amaziko eeR & D anokusekwa ngendleko zotyalo mali lweKanal Istanbul Project?
101. Zingaphi iiprojekthi ezinokuqaliswa ngokwandisa amaxabiso otyalo-mali lweKanal Istanbul Project kunye neR & D kunye neZiko leNkxaso kwiZiko?
Zingaphi izibonelelo zamandla ahlaziyiweyo ezinokusekwa ngeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
103. Zingaphi iiprojekthi ezinokufezekiswa ngokwandisa iinkuthazo ezisekwe kwicandelo le-IT ngexabiso lotyalo-mali lwePanal Istanbul Project?
104. Zingaphi iiklasi ezinomthamo wabafundi abangama-20 onokuvulwa ukuze kufakwe iikhowudi zeKanal Istanbul Project kunye nokwenza iikhowudi kufundiswe njengesifundo kwizikolo zaseprayimari?
105. Zingaphi iiprojekthi ezinokuthi zixhaswe ukwenza igalelo kuphuhliso lokhenketho ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
106. Zingaphi iiprojekthi zotyalo-mali zeendwangu ezinokuxhaswa ngemali yexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
107. Zingaphi iiprojekthi zotyalo-mali lwezimbiwa ezinokuthi zixhaswe ngendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
108. Zingaphi imali ezinokubonelelwa ngeprojekthi yotyalo-mali lweKanal Istanbul Project kwaye zingaphi irediyo, umabonwakude, izixhobo zonxibelelwano kunye nezixhobo ezenziwayo?
109. Ngaba umthombo wexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project kunye nokuveliswa kwezithuthi zomoya nezomhlaba ziyaxhaswa?
110. Zingaphi iiprojekthi zotyalo-mali kwezokugcina izityalo ezinokuxhaswa ngezindleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
111. Ngaba umthombo unakho ukubonelelwa ngeprojekthi yotyalo mali lwe-Istanbul Canal Project kunye nokwenziwa kwezixhobo neprojekthi yotyalo-mali?
112. Zingaphi iimveliso zephepha zotyalo-mali zamaphepha ezinokuxhaswa ngemali yeendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
113. Ngexabiso lotyalo-mali lweKanal Istanbul Project, oovimba banokunikwa iprojekthi yeendiza?
114. Bangaphi abaqeshi abanokufumana inkxaso yomvuzo ubuncinci ngonyaka kunye nendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project?
115. Unokunikwa isibonelelo sokuxhasa utyalomali lwemfuyo lwabantu abaliqela kumaphondo aphantsi kwePhulo laseAnatolia Southeastern ngeendleko zotyalo-mali lweProjekthi ye-Canal Istanbul?
116. Bangaphi abantu kumaphondo abagqunywe yiProjekthi yoLwandle Olumnyama yeMpuma ngeendleko zotyalo-mali kwiPaneli yeIranbul banokunikwa isibonelelo sokuxhasa utyalomali lwabo lwemfuyo?
117. Bangaphi abantu abakumaphondo aphantsi kwephulo iKonya Plain abanokunikwa isibonelelo sokuxhasa utyalomali lwabo lwemfuyo?
118. Bangaphi abantu kumaphondo ngaphakathi kwinqanaba le-Anatolia yeMpuma kunye nendleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project banokunikwa isibonelelo sokuxhasa utyalomali lwabo lweemfuyo?
UTanrikulu wabuza uNdunankulu malunga nesiganeko kwi-Metro yaseIstanbul
I-MHP ka-Ahmet Kenan Tanrikulu: Ukwazi ithenda ye-treni phesheya
I-CHP iTririkulu, i-Damage Railways kwi-Agenda ye-Agenda
I-Tanrıkulu yacela i-TCDD ukuba ihlukunyezwe ngomlomo nangokwenyama
I-Tanrikulu, i-3 Ukususela Ngomhla Ovulekileyo. Ibhuloho ibuzwa ireyithi yokusetyenziswa
I-CHP i-Tanrıkulu Ishukumisela ukuhanjiswa kweeMetro Tenders kwi-Agenda ye-Agenda
I-CHP iTririkulu Ucele uNdunankulu uthi
I-CHP iTanrıkulu, i-YHT icele iNdibano kubantu abajongene nenhlekelele
Imibuzo yeCPli Akkiraydan Metro
Ukugxeka kwe-Izmir Tram ekufunyenwe kwiTanrikulu nge-MHP
ISibhengezo seThenda: I-Basmane-Afyon Line Km: Ekuqinisekisiwe kweKhonkrithi phakathi kwe-118 + 600 - 119 + 120…
Umbuzo we-metro kaKocaoglu: Kutheni unikwe imvume yokuthenga ngetyala?
Ukubukela ukuphuma kwelanga kwiNtaba kaThixo
Inkxaso evela kuTanrıverdi ukuya kwiprojekthi ye-Spil ye-ropeway project
Ukuphuma kweNtaba kwiNtaba yamaThixo
Projekthi yoLwandle oluMnyama
IProjekthi yeKhanal Istanbul
Iindleko zotyalo-mali lweKanal Istanbul Project
IKalal Kanstanbul isiphakamiso sombuzo
Iprojekthi yeConya Plain
Qhagamshelana neSezgin ngqo
I-50 yezigidi ze-Euro iTyala leFahrettin Altay Narlidere Metro
Abakhenkethi kwi-Eastern Express yokwamkela iiNxusa zase-EU
Uhambo olumiyo kuThutho-lweSithili e-Manisa olususiwe
Icandelo loMphathiswa Wezothutho: '2002 Abantu bafa kwiingozi zeLoliwe ngo-2019 ukuya ku -1678'
Isikhululo sebhasi i-Istanbul enkulu siphumelele iiNkxaso zoBabini abaTradi bakaBemi
Iinkonzo zoLoliwe eziSantya esiphezulu ezizayo ebantwini base-Eskişehir
Şamandar Ucacise ngeminikelo yoLoliwe oPhakamileyo kwiBolu
IMetro iya kwakhiwa kwindlela yeMetrobus
Ubomi obungaphantsi koMhlaba eIstanbul: Imisebenzi yeMetro
ISibhengezo seThenda: Adapazarı-Mithatpaşa Station Road Regeneration and Scissor Post Work
NgoFebhuwari 10 @ 14: 00 - 15: 00
NgoFebhuwari 11 @ 08: 00 - NgoFebhuwari 12 @ 17: 00
Isibhengezo seThenda: I-Tensioner Clamp iya kuthengwa
Isibhengezo seThenda: I-Slip Lamas iya kuthengwa
Isaziso sokuthengwa kwempahla: Kuya kuthengwa iRostrum kunye neZinto eziTshixwayo
I-Arhente yokuGunyazisa yaseTurkey yokuQesha abaSebenzi
ISapanca Kırkpınar Iprojekthi yeCable Car eyemileyo
I-SAMULAŞ Iphakamisa Izizukulwana ezizayo
Afyonkarahisar Inqanawa yeCable Car Cable kuTender
IDenizli Cable Car Barriers
I-Filyos Port Superstructure ithenda yokuHanjiswa kuloNyaka
Isicwangciso soPhuculo seKhanal Istanbul sivunyiwe
I-TÜDEMSAŞ Shrank 40 Ipesenti kwiminyaka engama-80
Abasebenzi beMetro Istanbul Zonwabele kwaye ufunde
Umphathi-Jikelele we-EGO u-Alkaş wadibana nabafundi belungiselela iiprojekthi kwiiNkqubo zesitimela
amathambo nasekuqiniseni le Railway Sector noKwenziwa Logistics e Turkey
Turkey Rally Championship kaThixo Isihloko Xhasa Shell Helix
Ikhalenda yeSizwe yezeMidlalo yeSizwe ka-2020 Yabhengezwa
Isigqibo seHike sokuThuthwa koLuntu eIstanbul
Iinkampani ezingama-25 eziThengiswayo kwiimoto zeKhaya
BMW 4 Series Ivuza imifanekiso